पोखरा, २४ असोज। कास्कीको नयाँपुलमा नयाँ पेट्रोलपम्प सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा ५ का अध्यक्ष समेत रहेका जीवनाथ पौडेलले पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। पर्वत पातिचौरदेखि हेमजासम्म कतै पनि पेट्रोलपम्प नहुँदा गाडीलाई समस्या हुन थालेको गुनासो आएपछि समाधानका लागि पम्प शुरु गरेको उनले बताए। ‘यति लामो राजमार्ग छ। पेट्रोलपम्प नजिक छैन,’ उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ बीचैमा तेल सकियो भने पोखराबाट… पुरा पढौ
खैरेनीटार, २४ असोज । सगरमाथा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि., शुक्लागण्डकीको सातौ साधारणसभा तथा तेस्रो अधिवेशनबाट केशवराज घिमिरे पुनः अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । संचालक समिति उपाध्यक्षमा बाबुलाल श्रेष्ठ, सचिवमा सन्तोष घिमिरे, सहसचिवमा रहरमान मल्ल, कोषाध्यक्षमा खुमाया थापा र सदस्यमा कमलमोहन घिमिरे, शिवदत्त ढकाल, केदारभक्त घिमिरे, सपना ढुंगाना, भूपेन्द्र गुरुङ र युवराज भट्टराई चयन भए । यस्तै, लेखा समिति संयोजकमा सुजनराज… पुरा पढौ
पोखरा २४, असोज। बार्दली बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.ले आफ्नै भवनबाट कारोबार संचालन गरेको छ । पोखरा-८, रत्नचोकस्थित उक्त भवनको गण्डकी प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले उद्घाटन गरे । प्रमुख अतिथि मन्त्री थापामगरले संस्थाको छैटौ वाषिर्क साधारणसभामा सानो पुँजी परिचालन गरी आर्थिक क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनु सहकारीको ठूलो देन रहेको बताए। उनले सहकारी मार्फत उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै लैजानु… पुरा पढौ
पोखरा, २४ असोज । कुमारी बैंक लिमिटेड र पोखरा सभागृहचोकमा रहेको युनाइटेड रेफरेन्स ल्याबोरेटरी प्रालि (युआरएल) बीच सेवामा सहुलियता दिनेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ। सम्झौतापत्रमा बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजीव गिरी, बैंकका पोखरा शाखा प्रबन्धक सुदर्शनजंग राणा र युआरएलका प्रबन्ध निर्देशक ठाकुरप्रसाद पन्तले हस्ताक्षर गरेका छन्। बैंकका सेवाग्राही, कर्मचारी, सेयरधनी र सञ्चालकले युआरएल हुने सबै प्रकारका रक्त परीक्षणमा २५ प्रतिशत छुट… पुरा पढौ
पोखरा, २४ असोज । पोखरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको गण्डकी विकास बैंकले सिराहाको लाहनमा शाखा विस्तार गरेको छ । सो शाखा उद्घाटन गर्दै लाहन नगरपालिकाका प्रमुख मुनी शाह सुडीले बैंकलाई लाहनमा स्वागत गर्न पाउँदा खुशी लागेको बताए । उनले सेवाग्राहीले सरल र सहज रुपमा वित्तीय सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेशमबहादुर थापाले बैंकको गतिविधि सहित भावी कार्यक्रमबारे जानकारी… पुरा पढौ
पोखरामा १८ हजार भेंडाच्याङ्ग्रा र खसीबोका भित्रिँदै
पोखरा, २३ असोज । यसपालिको दशैँलाई पोखरामा १० हजार हाराहारीमा भेंडाच्याङ्ग्रा र आठ हजार जति खसीबोका ल्याउने तयारी छ। व्यापारीले चीन, मुस्ताङ, मुगु र डोल्पादेखि च्याङ्ग्रा पोखरा ल्याउँदैछन् । च्याङ्ग्रा व्यापारी रमेश खड्कीका अनुसार पोखरा झरेका अधिकांश च्याङ्ग्रा काठमाडौं लैजाने तयारी छ। ‘खासातिरबाट यसपालि च्याङ्ग्रा आएका छैनन्। काठमाडौंका अधिकांश व्यापारी पनि यतै छन्,’ उनले भने, ‘मुस्ताङको च्याङ्ग्राको माग अहिले निकै बढेको छ।… पुरा पढौ
पोखरा, २३ असोज । आधुनिक बैंकिङ, ग्रामीण बैंकिङ र लघुवित्त सेवा एकै साथ संचालन गर्दै आएको मुक्तिनाथ विकास बैंकले झापाको बिर्तामोड र सुनसरीको धरानमा शाखा कार्यालय विस्तार गरेको छ। बिर्तामोड शाखा उद्घाटन बिर्तामोड नगरपालिकाका मेयर ध्रुवकुमार शिवाकोटी र धरान शाखाको उद्घाटन सुनसरी जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष राजेन्द्र शाहले गरे। दुवै शाखाको उद्घाटन समारोहमा वक्ताले बैंकको प्रगतिको कामना गर्दै बैंकिङ व्यवसाय… पुरा पढौ
सेभेन लेक कृषि सहकारीको साधारणसभा
लेखनाथ, २२ असोज ।पोखरा-२६ स्थित सेभेनलेक कृषि सहकारी संस्था चौथो बाषिर्क साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधिसभाका सासंद खगराज अधिकारीले निर्वाहमूखी कृषि उत्पादनलाई पर सारेर ब्यवसायी उत्पादनबाट समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा समाहित हुन आग्रह गरे । ‘अव, कुरा धेरै गरियो । त्यसैले, गफ र भाषणाले कृषिमा परिवर्तन आउँदैन । अवको अवश्यकता भनेको कृषिमा आधारित उद्योगधन्दाहरु संचालन गरी कसरी कृषि उत्पादनलाई वढाउन… पुरा पढौ
रिठेपानी सहकारीको छैटौ साधारण सभा
लेखनाथ, २१ असोज। पोखरा महानगरपालिका २७ स्थित रिठेपानी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको छैटौं साधारण सभा शनिवार सम्पन्न भएको छ। वडाध्यक्ष पूर्णकुमार गुरुङले साधारणसभा उद्घाटन गर्दै सहकारीहरुले सेयर सदस्यको जीवनस्तर उकास्न ‘एक सहकारी, एक उत्पादन’ लाई आत्मसाथ गर्दै आयआर्जनका लागि कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्नेमा जोड दिए। संस्थाका सल्लाहकार सु. जगबहादुर गुरुङ, ले. धनबहादुर गुरुङ, ऋण उपसमिति संयोजक विष्णुप्रसाद गुरुङ… पुरा पढौ
लेखनाथ, २० असोज। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन्। लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघको २२ औ साधारण सभामा शनिबार बोल्दै अध्यक्ष राणाले सरकारले निजी क्षेत्रले व्यहोरेका समस्यामा गम्भीर बन्न आग्रह गरिन् । उनले करको व्यवस्थापन, लगानीमैत्री वातावरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्याजदर, सरकारी नीति तथा अनुगमन लगायत क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने… पुरा पढौ